Fitsidihana tany Amoron’i Mania: nampitandrina ny kolikoly sy ny tsikombakomba ny praiminisitra | NewsMada
Fitsidihana tany Amoron’i Mania: nampitandrina ny kolikoly sy ny tsikombakomba ny praiminisitra
Par Taratra sur 08/04/2019
Nidina teto amin’ny faritra Amoron’i Mania niaraka tamin’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta misahana ny fandriampahalemana ny Praiminisitra Ntsay Christian, ny faran’ny herinandro teo. Anisan’izany ny tao Ambatofinandrahana, Manandriana, ary Ambositra. “Tokony hampanjakaina ny fahamarinana. Mampitandrina ny amin’ny tsy tokony hisian’ny kolikoly intsony eo amin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana ny fitondrana. Ny tokony hitsaharan’ny firaisana tsikombakomba amin’ireo tambajotran-jiolahy, na ho an’ny mpitandro filaminana izany, na ho an’ny vahoaka tsotra, mifamatotra na mahafantatra ny fisian’izany eo amin’ny fiaraha-monina, na ho an’ny fitsarana ihany koa”, hoy izy.
Hohatevenina ny mpitandro filaminana
Novoriana ireo tompon’andraikitry ny fandriampahalemana eny anivon’ny faritra na ny OMC sy ireo solontenam-panjakana isan-tokony amin’ny lafin-tany, ary ny avy amin’ny sehatra tsy miankina, nampitana ny soridalana handrindrana ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana. Anisan’izany ny fanatevenana ny mpitandro filaminana any amin’ireo distrika ireo.
“Mijaly ny vahoka manoloana ny fisian’ny asan-jiolahy sy ny risoriso ary ny goragora hita eo amin’ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana. Misy ainga vao tian’ny fitondram-panjakana ho entina hanarenana ny firenena, mitaky fametrahana lamina ary ilana ny fandavan-tenan’ny tsirairay. Tompon’andraikitra voalohany amin’ny fanantaterahina izany ny lehiben’ny governemanta nefa voakasiky ny fandriampahalemana avokoa ny rehetra, araka ny tandrify ny tsirairay”, hoy ihany izy.
Nomarihiny fa ilaina ny fanovana ny toetsaina eo amin’ny fanantaterahana ny asa iandraiketan’ny tompon’andraikim-panjakana tsirairay isan-tsokajiny. Ilaina ny fiaraha-miasa hialana amin’ny fifanilihana raha toa misy zavatra tsy mety. “Eo ny fanajana sy ny fifantohana tanteraka amin’ny asam-panjakana, antoky ny fahombiazan’ny lamina rehetra apetraky ny fitondrana”, hoy izy.
Hiverina amin’ny laoniny ny herinaratra
Nohararaotin’ny lehiben’ny governemanta koa fa voafehy ny fipariahan’ny valanaretina toy ny pesta sy ny kitrotro, namono Malagasy maro. Na izany aza tokony ho malina hatrany eo amin’ny fanaraha-maso amin’ny tranga sasantsasany mbola miseho ireo tompon’andraikitry ny fahasalamam-bahoaka. “Tokony hanamafisana hatrany ny fanentanana ny vaksiny mba hiarovana ireo zaza malagasy”, hoy izy .
Momba ny Jirama kosa, nambaran’ny Praiminisitra Ntsay fa tokony efa hijanona ny fahatapahan’ny herinaratra vokatry ny tsy fahampiana solika. Efa nisy ny fifampiresahana natao. Nanteriny fa haverina tsy ho ela amin’ny laoniny ny famatsiana herinaratra any amin’ireo distrika any Amoron’i Mania, taorian’ny nanomezany baiko ny tale jeneralin’ny Jirama. Ankoatra izany, nentanina amin’ny fambolen-kazo ny olom-pirenena rehetra mba hametrahana lova ho an’ny taranaka.